Fuse Vagadziri & Vatengesi | China Fuse Fekitori
XRNT backup fiyuzi
Iyo magne X inokanganisa inoshandiswa mune dzakateedzana nezvakaderera zvazvino dziviriro ekutanga michina senge Bay-o-net Fuse kana Magne X Iyo magne X inokanganisa. Iyo magne X inokanganisa inoshanda kwazvo yazvino-inodzora chikamu inoderedza mhedzisiro yekukanganisa kwakanyanya kushushikana kwazvino pamidziyo uye neyakagovaniswa system.Iyo shoma yekukanganisa chiyero inoenderana neyeye yakaderera yazvino inokanganisa kudzivirira kusingadiwe kwakaderera ikozvino kushanda; asi huwandu hwayo hwekukanganisa hunobvisa hwepamusoro ...
Dual sensing fuse waya inoshandiswa muBay O-net fuse magungano kuchengetedza maficha ekuparadzira fomu inokuvadza mafungu uye kuchengetedza masystem ekuparadzira kubva kumidziyo yakundikana. Dual sensing fuse waya kwete chete zvechipiri zvikanganiso, yakawandisa mutoro mafashama uye shanduko yemvura tembiricha. Ivo vano ganhurira-kwenguva-refu shanduri yekudziya inokonzerwa nekuwandisa uye kwakanyanya tembiricha nharaunda Matanho Ekutarisa: Voltage Maximum Imwe-Chikamu Chikamu Chekuvhiringidza Chiyero Chivharo cheGomo Gungano (rms asymmetrical) ...
bay o mambure fuse mubati
Bay-o-net Gungano ndicho chinhu chipfupi chemafuta-shanduko, kuchengetedza michina kana yapfuura-yazvino. Kana iwe ukaisa iyo fiyuzi waya mairi, iyo Bay-o-net ichapa yakachengeteka, ine hunyanzvi dziviriro, zvinoenderana neazvino, tembiricha yemafuta. Iyo Bay-o-net Assembly inokodzera yazvino yekuona fuse waya, mbiri yekuona fuse waya, hunyambiri element fiyuzi waya, uye ELSP yazvino-inogumira backup fuse, nezvimwe. Iyo inokodzera yakakwira-voltage magetsi system ine inochinjanisa yazvino ye50HZ, standard volta ...